Abenzi kunye nabathengisi - Abenzi base China iimveliso
Thumela i-CAP & TOP
Ukuhamba ngenqanawa kwePVC
Ukuhamba ngenqanawa kwePVEMIUM
INkulumbuso Preassembled elihamba ngomgaqo
I-Premium Classic ye-Railing Prestiled Railing yakhelwe ukuhlala! Ngamandla okuzinzisa e-UV kunye nokugqitywa kwefuthe elide, iPrimiyamu Classic iya kuma uvavanyo lwexesha kunye nendalo yomama. Phucula indlela yakho yokuphila yangaphandle kunye nokugcinwa kwemveliso yeemveliso zasimahla!
-Akukho msebenzi ungaphaya emva kofakelo lwexesha elinye.
Umgangatho olungileyo kwaye uqinile njengelitye.
-Yintle kwaye inokuhombisa amakhaya abantu.
- Easy ukugcina.
Le cap yoxinzelelo iphathwa nge-cap yentloko iya kongeza umnxeba kuyilo lwezithuba zakho. Ezi zikhundla zeposi ziza nomtya wokuncamathelisa wangaphambi kokufakwa ngokulula. Yenzelwe ukulingana ngaphezulu kwe-4-in x 4-in post. Iifowuni zeposi ziyindlela enhle yokongeza umgca wokugqiba kwiibhokisi zeposi, iingcingo, iimpawu kunye nokunye!
Kuquka umtya wokuncamathelisa wangaphambi kokufakwa ngokulula
Ingena ngokufanelekileyo kwi-4-in x 4-kwisithuba somthi
Ukuphathwa koxinzelelo kubomi obude
Yongeza ubuhle kunye nokukhuseleka kwiposti yakho
Ogqibeleleyo kumgangatho, ucingo kunye nezinye iiprojekthi zangaphandle
Sincoma ukugqoka ezi zinto zangaphandle ezikumgangatho ophezulu ukugcina ubuhle bendalo beenkuni
Iinkqubo zeLongjie Railing zivelisa iiprofayili zomgangatho ogcweleyo kunye nezitayile ezingapheliyo kodwa siyaqonda ukuba eminye imisebenzi ifuna into ngokwesiko. KwaLongjie sisebenza kunye nawe ukuyila eyona ifanelekileyo yeprojekthi yakho. Sinobuchule bokuziqhelanisa neenkqubo zethu zomdaniso wokutshatisa umbono weprojekthi yakho.
Akukho msebenzi ungaphaya emva kofakelo lwexesha elinye.
2. Umgangatho olungileyo kwaye uqinile njengelitye.
3. Yinto entle kwaye inokuhombisa amakhaya abantu.
4. Easy ukugcina.